Liverpool Oo Barbarro QUUS Ah La Gashay Everton, Hoggaankii Horyaalka Oo Man City Gacanta U Galay Iyo Jurgen Klopp Oo Murugo Usoo Hoyatay – Latest Sports News
Liverpool Oo Barbarro QUUS Ah La Gashay Everton, Hoggaankii Horyaalka Oo Man City Gacanta U Galay Iyo Jurgen Klopp Oo Murugo Usoo Hoyatay
Liverpool ayaa barbaro niyadjab leh la soo gashay kooxda ay dariska yihiin ee Everton waxayna Liverpool iska qasaarisay fursada ay ugu soo laaban kartay hogaaminta Premier league laakiin Manchester City ayaa heshay fursada ay baaqi ugu sii ahaan doonto hogaaminta Premier league.
Mohamed Salah ayaa lumiyay fursadihii ugu fiicnaa ee gool dhalineed ee ay Liverpool heshay waxayna hadda Reds yeelatay 70 dhibcood kadib 29 kulan oo la ciyaaray waxayna Man City oo isla 29 kulan ciyaartay haysataa 71 dhibcood waana arin muujinaysa sida ay Reds u lumisay wax walba oo ay haysatay.
Kaydka: Simon Mignolet, James Milner, Naby Keita,Adam Lallana, Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino, Daniel Sturridge.
Kaydka: Maarten Stekelenburg, Richarlison, Phil Jagielka, Jonjoe Kenny, Cenk Tosun, Tom Davies, Andre Gomes.
Liverpool ayaa ku hamiyaysay in ay ku soo laabto hogaaminta Premier league kadib markii ay Man City la sii wareegtay guushii xalay ee ay Bournemouth ka gaadhay laakiin Jurgen Klopp iyo kooxdiisa Reds ayaa ogaa waxa kaga horeeyay Goodinson Park halkaas oo ay Everton iskugu sii diyaarisay in ay rajada Reds ee koobka Premier league ay ku xumayso.
Qaybtii hore ee kulankan ayaa ahayd mid aad u adag isla markaana ay adkayd in fursado cadaan ah oo gool dhalineed la abuuri karo, laakiin inkasta oo ay Reds ahayd kooxda inta badan ciyaarta maamulaysay, haddana waxaa ka maqnaa hal abuurka khadka dhexe iyada oo Fabinho, Henderson iyo Wijnaldum ay awoodi waayeen in ay hal abuur fiican sameeyaan.
DAQIIQADII 28 aad Liverpool ayaa u muuqatay in ay heshay goolka furitaanka kadib markii uu Mohamed Salah helay fursadii qaybtii hore ee ciyaarta oo dhan ugu fiicnayd isla markaana ugu halista badnayd wuxuuna Salah kubbad kula soo baxay goolka Everton wuxuuna u baahnaa in uu garaaco goolhaye Jordan Pickford oo kaliya laakiin goolhayaha reer England ayaa gacantiisa midig ku joojiyayay kubbada goolka noqon lahayd.
Marka laga yimaado fursada dahabiga ahayd ee uu Mohamed Salah qasaariyay, qaytii hore ee ciyaarta ayaa noqon mid ay labada kooxood abuureen fursado badan waxaana qaybtii hore lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii ciyaarta laysugu soo laabtay qaybteedii labaad ayay labada kooxood soo laabteen iyaga dardaaranki ugu danbeeyay soo qaatay waxayna Everton daqiiqadii 52 aad goolhaye Alisson ku qasabtay in uu sameeyo badbaadin fiican kadib markii uu Calvert-Lewin uu fursad wayn helay.
Daqiiqadii 57 aad Mohamed Salah ayaa markale u muuqday in uu ugu danbayn dhalinayo goolka ay Liverpool ku soo daashay laakiin Michael Keane ayaa Salah ka taabtay kubbada uu goolka ku dhalin lahaa.
Daqiiqadii 60 aad Everton ayaa ciyaarta ka saartay Theo Walcott waxaana soo galay Richarlison laakiin saddex daqiiqo kadib Klopp ayaa ciyaarta soo galiyay Roberto Firmino iyo James Milner wuxuuna saaray Origi iyo Wijnaldum waxayna ciyaartu noqotay mid dagaal iyo xamaasad waali ah isku badashay.
Daqiiqadii 69 aad Van Dijk ayaa kubbad ku soo horjoojiyay goolka Everton hortiisa waxaana banaan wayn helay Fabinho laakiin intii uu isa soo kala gurayay ee uu soo daahay waxaa taalkan gool badbaadin ah ku sameeyay Digne kaas oo kooxdiisa xaalad xun ka badbaadiyay.
Ciyaarta ayaa noqotay mid sii adkaatay laakiin badaladii uu Klopp sameeyay ayaa wax ay soo kordhiyaan iska dhaafe waxya noqdeen kuwo aan awoodii ciyaareed ee Liverpool ee ciyaarta sii joogtayn iyada oo badaladii Everton noqdeen kuwo heerkii Everton si wayn sare ugu soo qaaday.
Daqiiqadii 84 aad Klopp ayaa jamaahiirta kooxdiisa kaga cadhaysiiyay markii uu Adam Lallana ciyaarta soo galiyay iyaga oo ka filanayay Shaqiri ama Naby Keita laakiin Lallana ayaan waxba ciyaarta ku soo kordhin.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro gool la’aan ah waxayna Everton awooday in ay laba dhibcood ka lumisay kooxda ay colaada wayni kala dhexayso ee Reds. Man City ayaa ugu danbayn baaqi ku sii ahaan doonta hogaaminta Premier league waxayna Reds gabi ahaanba lumisay fursadii ay City kaga fiicnayd.